Eczema muvana | Mapeji evaravara ehurukuro
Chikonzero che atopic dermatitis
Zvinyoro zvinyoro zveatopic dermatitis
Izvo zvinosvibisa, iwe unotora. Iyo inobata zvakare, iwe unowedzera zvakanyanya. Kusvikira pakupedzisira zvose zvinotyisa uye zvine ropa. Chii chiri kutotambudza kune vanhu vakuru, chinenge chisingaitiki kuvana: rega kuchingura kana izvi zvinoshamisa zvichivhiringidza paatopic dermatitis inotanga.
Asi chii chinonzi atopic eczema?
Kunenge 15% yevana vose vanobatwa nechirwere ichi, vanhu vakuru vanowanzosanyanya kudarika. Muatopic dermatitis - inonziwo atopic eczema - mavara inoputika, pamwe necheka rakacheka, rinotyisa zvikuru.
Nzira yekuchengetedza mahara ekuzorora kwevana
Pasinei nechirwere chiripo, chinogona kutsanangurwa kuburikidza neganda. Kana zvichida 3 miitiro yepamusoro uye 3 zvidzitiro zviduku zvinosangana, chirwere chinonyatsoziva. Zvechokwadi, chero zvakadaro, mazano emumwe chiremba anofanira kuwanikwa!
Kupararira kwemaitiro (mabheti, mabvi, mutsipa, mimba)
Chirwere chemhuri (asthma, kuora mwoyo, atopic dermatitis)
Muchena wechipfuva kupindura panzvimbo peganda rakaita tsvuku mushure mekucheka
Kuramba kwakapoteredza muromo
Itching kuburikidza nekutuka
Kusabvumirana kwepfeko dzemvere
Dermatitis zvakapoteredza mbiru dzakapoteredza
Mumwe angada kufunga panguva ino yezvirwere zvose zvenyika ino - pamusoro pezvose zvinorwara zvakadai-kunyatsojekeswa. Zvinosuruvarisa kuti kutambura kwevanhu vazhinji hazvisi izvo. Kusiyana, semuenzaniso, mvere dzembudzi dzinoita kuti munhu awane "Mwana wako anoregiki kune mabhiza"Mhosva yacho inofanira kunyatsoonekwa.
Mumwe anotaura pano nezvezvinhu zvinokonzera uye zvinokonzera zvinhu, izvo zvinogona kukonzera kukwira mumurwere. Kuti urarame chirwere chacho, hachibatsiri kuderedza zviratidzo, asi kutanga uye zvakanyanya, zvikonzero zvinofanira kugadziriswa.
Uye urongwa hwezvinokonzera zvinokonzera ndehurefu uye hwakaoma:
Kushungurudzika kana mupfungwa kunetseka pamuviri (semuenzaniso kuora mwoyo)
Kurwara kwemhuka chero ipi zvayo (semuviri wemhuka, mapureni, guruva reimba kana kudya kwemazuva ose)
iyo mamiriro ekunze (semuenzaniso kutonhora kwakanyanya kana kusanaya kwemvura)
Zvinhu zvakasikwa zvakasikwa zvakadai sokupedza gasi
Kushambidzwa kwakashata kweganda
Hormonal zvinokonzera zvakadai sekuzvitakura
Iwe unoona pamusana pemuenzaniso mashomanana: zvikonzero zvinogoneka ndezvizhinji. Kubatsira pano i "Disease dhayariKutungamirira. Nyora pasi zvinyoronyoro zvawakaita, kudyiwa kana kunzwa mukati memazuva.
Chinhu chiduku: A "chirwere chinyorwa" chinogonawo kubatsira zvikuru kune dzimwe zvirwere zvakadai semakune. Kubva pane izvi, zvinokwanisika kuwana chikonzero pano zvakare. Muenzaniso wezvakangoitika ndeyekuti: Ngatidane munhu wedu Mario. Mario haana kumbobvira atambura nemakwenzi kana maputi, asi kamwe-kamwe vakange varipo. Uye havana kuenda. Hazvina mhosva kuti zvinorevei kuti Mario akaedza, zvisinei nemishonga yemhuri kumusha, zvigadzirwa zvinowanzobva kuchiremba chemishonga kana mari inokosha kubva kumishonga, hapana chakabatsira.
Pane imwe nguva Mario akatanga kuchengeta diary, zvaaidya panguva, zvipi zvaakazoita uye nezvimwe. Mutsva yake yakazotevera, akawana kuti akanga ari kuwana sandwiches kubva kune mubiki mutsva mangwanani oga oga kwemwedzi inoverengeka. Pakupedzisira Mario akadzivirira mubiki pachirongwa chemavhiki e2 ... uye zvakaguma nei? Zvakarurama, mapfupa akadzoka kusvikira vapera zvachose. Mubiki anofanira kunge akashandisa zvimwe zvekudya izvo muviri waMario wakanga uchinetseka, uye semugumisiro, chigamba chakaumbwa.
Sezvinenge zvatsanangurwa, danho rokutanga nderokubvisa chikonzero kuti urwise chirwere ichi kubudirira. Vana vanorwara nguva dzose vanosuruvara zvikuru, kunyanya kana vari vana vavo uye inopopota uye inokura nekuita. Kuti zvigadzire kunyaradza izvi, taisa pamwe 5 tips dzinofanira kubvisa kutema, pamwe nekukurumidza:
Sezvinonyadzisa sezvinonzwika: usatsvaga! Kunyangwe zvatove zvakaoma kune vanhu vakuru uye zvichida zvingave zvisingabviri kuvana, kusvetuka kunoderedza marwadzo kwenguva pfupi, asi zvino inodzoka nehukuru hunotyisa. Ichokwadi chaicho chinotyisa!
Chinhu chiduku: Kuchengetedza kusakosha kusingadikanwi, somuenzaniso, usiku panguva yokurara, zvinobatsira kutema zvidonho zvishoma uye kupfeka makotini girafu.
Ita zvinokonzerwa nehaini yewaini wraps uye uzviise panzvimbo dzakakanganiswa. Kuburikidza nematanini inoita hutete hunoputika iyo iyo ganda rinorasikirwa nemhepo inenge isina kunyorova (yeuka, ganda rakaoma!) Uye kubhururuka kunodzoka zvakare.
Nguva dzose kugadzira
Uye yakanakisisa nekasiki yega kana mafuta. Somuenzaniso, mafuta e Moroccan argan anonyatsokodzera pano. Mafuta eArgani ndeyezvisikwa, mafuta evegan ane huwandu hwehupenyu hwehutachiona hwehutachiona uye vitamini E, iyo inoderedza kubvongodza uye inoita kuti ganda rive rakakosha. Kuwedzera mamwe mashoko nezve argan mafuta ...
Sezvakanyorwa kare pamusoro pekunetseka kunogona kuva chikonzero chinokonzera. Muchiitiko ichi, kuzvidzora muviri kunogona kubatsira kuwedzera hupenyu hwako pachako uye, sechikonzero, kubvisa kunatswa.
Dhura zvakanaka uye woma
Paunonyorera, usatende mvura yacho inopisa, sezvo ichi ichibudisa ganda. Ipapo gadzirai ganda panzvimbo yemavara, dab nechisviniro panzvimbo iyo, kuti udzivise kusakosha kweganda paganda. Zvakakosha pano mushure meganda rekugadzirisa zvakare nekukanda.
Kururamisa mufambiro mune dutu | vana
Kuverenga kunobatsira kunobatsira nematunhu mabasa
Gadzira cress musoro nevana iwe pachako